Etu esi ekpuchi nzọ na ntanetị n'ịntanetị
A cosa na-eje ozi kpuchie osisi n'ịgba chaa chaa n'ịntanetị?
Na teknuzu teknuzu kpuchie nzọ ọ pụtara ịme nzọ nke abụọ, nke a na-akpọ 'mkpuchi nzọ', nke na-enye gị ohere nwetaghachi ego a na-akwụ ma ọ bụrụ na ị maghị isi nsonaazụ ị gbara.
A na-akpọkwa ya dị ka nzọ 'parachute' ma na-etinyekarị ya iji kpuchie eserese na ụlọ ndị otu ị zitere na ọkacha mmasị gị anaghị emeri egwuregwu ahụ, ikekwe na-ata ahụhụ oge mmerụ ahụ.
Gịnị mere ị ga-eji kpuchie ịkụ nzọ na ịkụ nzọ n'ịntanetị?
Ezigbo ajụjụ. N'ezie, ọ bụrụ na ị tinyeworị ego na mmeri nke Juventus na 1,60 megide, dịka ọmụmaatụ, otu onye na-ajụ ma ọ bụ nke dị ala, gịnị kpatara ị ga-eji chụọ àjà ọzọ nke mmeri ahụ enwere nke ị ga-emesị nweta?
N'ezie, ọ bụrụ na ekwuputara mmeri nke Juventus na 1,60 site na itinye usoro iji kpuchie ihe osise m gwara gị maka ► qui - nke anyị chere na-ekwu maka 3,6 - ọ bụrụ na osisi gị bụ ihe atụ 50 euro, ịkwesịrị itinye mgbakwunye euro 19,23 iji kpuchie onwe gị ma ọ bụrụ na ị nwere eriri, ma ọ bụ ọ dị nwute na Juventus na-adọta kama imeri, ị ga-agbake ma euro 50 nke isi nzọ (isi nzọ) na 19,23 euro nke mkpuchi nzọ (mkpuchi nzọ), na o doro anya na ị gaghị emeri ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na, n'ụzọ megidere, ị meriri isi nzọ, agbanyeghị site na mmeri ị ga-ewepu ego akwụ ụgwọ iji kpuchie eriri ahụ ma ị nwekwara ike iche na ikekwe, na-enweghị mgbagwoju anya na ndụ gị, ọ ga-ezuru iji nzọ abụọ ohere 1-X na 1,11 ma chefuo ya.
Nyere na mgbakọ na mwepụ abụghị echiche na na ọ bụrụ na ị dọpụta blanket ahụ n'otu akụkụ ya na-agbadata n'ụzọ zuru ezu na nke ọzọ, ọ bụrụ na usoro ịkụ nzọ gị dabere na otu nsonaazụ na ị dị mma na amụma ndị a, mgbe ahụ ị ga-echebe nzọ gị. ga-ekwe nkwa ịlọghachi nke dị elu na itinye ego na ya ma ọ bụrụ na ị merie karịa ịgba chaa chaa na ohere abụọ.
Ekele maka ngwanrọ a maka ịkụ nzọ n'ịntanetị nke m nwere, ọ bụghị ihe ijuanya Ọta Bet, ị ga-enwe ike inweta a dum usoro nke data na ada na-eme ka ihe kasị mma mkpebi na-ekpuchi gị ịkụ nzọ nzọ nzọ n'ụzọ kasị mma.
Jiri Bet Shield iji kpuchie ntanetị
Ka anyị hụ ozugbo otu esi eji sọftụwia a maka ntanetị n'ịntanetị: n'ọhịa Egwuregwu Egwuregwu ị ga-abanye na nsogbu ndị na-ere akwụkwọ na-enye maka nsonaazụ ikpeazụ 1-X-2.
Na ubi n'okpuru ị ga-ahọrọ Isi Egwuregwu (nzọ nzọ pụtara dị ka ihe ịrịba ama 1-X-2) na Ọta nzọ (mkpuchi nzọ) ma emesịa tinye ego ịchọrọ iburu na Bet-Main Bet (na ọnụ ọgụgụ m simulated 10 nkeji).
Pị bọtịnụ ahụ Calc ị ga - ahụ ozugbo ole ị ga - ịkụ nzọ na Shield Bet iji kpuchie onwe gị ma ọ bụrụ na enweghị mmeri na Main Bet.
Na nchịkọta ọnụ ọgụgụ ị ga-ahụ:
Ot Total Betel mkpuchi: ọ ga-abụ pasent nke ihe puru omume na ị na-mkpokọta hedging gị nzo; na ihe atụ dị n’elu ọ ga - abụ 58% nke akara ngosi 1 (Bet Main) tinyere 25% nke akara ngosi X, maka mkpokọta 83% nke ikpe nwere ike.
Ndị a percentages Ọta Bet gbakọọ ha ụgbụ nke ụtụ etinyere ya site n'aka onye na-ede akwụkwọ, ha kwesịrị ịnọchite anya ya ezigbo nsogbu nke ihe omume.
Et Net ị nweta uru: olee otu nkeji ị ga - enweta ma ọ bụrụ na ị merie Main Bet.
EtNet% uru: dị ka n'elu, mana egosiri dị ka pasent.
Net Net ịla n'iyi / uru: ọ bụ na ole ka ị meriri ma ọ bụ tụfuo ma ọ bụrụ na i merie Shied Bet; uru a kwesiri idikari efu, ma obu n'ihi na oburu na i merie uzo nke abuo, i ghaghi mmeri ma obu ida ihe obula.
N'ihi Ọta Bet ị ga - enwe ike ijikwa ịkụ nzọ gị nke ọma na mkpuchi yana, gịnị kpatara ya, ọbụnadị kpebie ikpuchi nzo ọzọ karịa eserese, ọ bụrụ n'eziokwu, kama ịkụ nzọ na akara 1 ma kpuchie onwe gị na akara X, ịchọrọ ịgbanwe usoro nke ihe ndị a, ị ga-achọpụta na ... nsonaazụ gbanwere!
Dịka ọmụmaatụ, cheedị (otu egwuregwu ahụ dị na mbụ) na ịchọrọ ịkụ nzọ na akara X ma kpuchie onwe gị na akara 1, dịka ị pụrụ ịhụ Ọta Bet -egosi gị otú mkpuchi nzọ bụ kpebiri elu (16,39 nkeji megide 3,57 na aga ikpe), kamakwa mkpụrụ mgbanwe nke ukwu, na-aga site na 18,64% na 43,99%!
Kpoo onye na-ere ahia na Bet Shield
Kedu otu esi eji sọftụwia ịkụ nzọ dị n'ịntanetị kacha mma? Anaghị m ekwe ka m gwa gị otu esi egwu egwu, naanị m nwere ike ịgwa gị ihe m ga - eme: dịka m degogo ► na post a, na enweghi ezigbo uru ma na-atụle oge nke anyị na-agagharị (obere oge), naanị otu ụzọ isi mebie emebi nke onye na-ere ahịa bụ igwu egwu na mmeri na-emeri.
N'agbanyeghị ihe nhọrọ ahụ bụ, ihe dị mkpa bụ igwu egwu ihe omume nwere nnukwu ihe puru omume ma tinyekwa osisi niile n'ime egwu ọ bụla ruo mgbe ha ruru otu ihe mgbaru ọsọ (kwụsị mmeri).
N'ihi Ọta Bet ị nwekwara ike gbakọọ nzọ gị n'oge egwuregwu (ịkụ nzọ ndụ); abata n'ime egwuregwu dịka ọmụmaatụ mgbe ị hụrụ na ị nwere ike ikpuchi ihe karịrị 90% nke nsogbu ahụ (Mkparịta ụka Bet Bet) ma na-ejide 'Net% uru' karịa efu ma megharịa ihe niile ruo mgbe ị gbachara okpukpu abụọ nke nzọ mbụ ma ọ bụ ihe mgbaru ọsọ na ị tọrọ onwe gị.
Nke a bụ atụmatụ nke gụnyere ọtụtụ obere usoro, mana ana m agwa gị na ihe niile na-atọ ụtọ ma na echefula na nde euro nwere 100 nde cents! (nke maka ndekọ ahụ kwekọrọ kpọmkwem na tọn 230 nke ihe mkpochapu).
Nbudata Nbudata	BShield.zip - 1 MB